Makeup | Posted on Dec 12, 2016 by kiki
Packaging ဒီဇိုင်းလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့အချက်ကိုက ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးတွေကို ၀ယ်ချင်လာစေတာပါပဲ။
Too Cool for School Max in Pocket Lip Balm, $12
အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး glossပုံစံ နှုတ်ခမ်းနီဖြစ်ပြီး Compactပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဗူးထဲမှာ မှန်ပါပြီးကြောင်မျက်နှာလေးပုံစံလုပ်ထားတဲ့အပြင် Metal Keychainလေးပါလို့ အိတ်မှာ အလှဆင်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ဈေးက $12ပါ။
Maybelline Baby Lips Crystal Moisturizing Lip Balm, $4.49
နာမည်ရှိပြီးသား Maybelline ကထုတ်တာဖြစ်လို့ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းစရာတော့မရှိပါဘူး။ဆိုးလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းမှာ နူးညံ့နေပြီး စေးကပ်မှုမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင် ခရစ်စတယ်အမှုန်လေးတွေပါဝင်ပြီး Grafftiပုံစံ စာလုံးလေးတွေကြောင့် ဘူးလေးဟာ ချစ်စရာကောင်းနေတာအမှန်ပါပဲ။ဈေးနှုန်းလေးကလည်း ချိုသာပြီး $ 4.49ပဲ ကျသင့်မှာပါ။
TonyMoly Panda’s Dream Pocket Lip Balm, $9.50.
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် သော့ချိတ်လေးလားထင်မှတ်မှားရအောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်ဒါ နှုတ်ခမ်းနီလေးက Tony Molyကထုတ်တာဖြစ်ပြီး အိတ်ဆောင်Lip Balmလေးပါ။အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းလေးက $9.50ပါ။
eos Shimmer Lip Balm in Sheer Pink, $5.49.
EOS Shimmer Lip Balm in Sheer Pinkကတော့ EOSရဲ့ ပုံစံအတိုင်း Leatherဆန်ဆန်ဘူးပုံစံအလုံးလေးကိုမှ အပေါ်မှာ ကနုတ်ပုံစံလေးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓာတ်နဲ့အာဟာရဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ဈေးကတော့ $ 5.49ပါ။
HolikaHolika Dessert Time Lip Balm, $10
Cupcakeတစ်ခုကို ဘယ်သူက ငြင်းဆန်နိုင်မှာလဲ အထူးသဖြင့် ဖရဲသီးနံ့လေး ပါတဲ့ ပန်းရောင် Lip Balm Cupcakeလေးကိုပေါ့။Holika Hoikaက ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းက$10ပါ။
Love + Sage Lip Balms, $12
ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းရိုးရှင်းပေမယ့် Brooklynမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးကို Instagramလို sortတွေကနေ ကိုးကားထားတဲ့ print designနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။$12ပါ။
The Body Shop Merry Kiss-Mas Wand, $24.
ချစ်စရာကောင်းပြီး အရသာရှိမယ့် Lip Butterလေးတွေကို ချိုချဉ်ပုံစံဘူးထဲမှာ သေချာထုတ်ပိုးထားပြီး ဘူးအပေါ်က Merry Kiss Masဆိုတဲ့ စာသားလေးက သင့်ကို ချက်ချင်းပြုံးသွားစေမှာပါ။Lip Butter ငါးခုပါဝင်ပြီး ဈေးနှုန်းက $24ပါ။
Skinfood Honeypot Lip Balm, $10
ပျားရည်အိုးပုံစံလေးဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းကို စားချင်စိတ်တွေပေါ်လာမှာပါ။Lip Balmအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး $10 ပါ။
It’s Skin Macaron Lip Balm in Grape, $6.40.
It’s Skin Macaron Lip Balm in GrapeဟာMacaronချစ်သူတွေအတွက်တော့အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။Sheaနဲ့ Cocoa ထောပတ်ပါပြီး Antioxidantပါဝင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးကို Macaronပုံစံ ဘူးလေးထဲမှာ ထုတ်ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းက $6.40ပါ။
MisshaVolumizing Lip Essence, $4.80
Tubeပုံစံမျိုး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ပေမယ့် အရောင်လေးတွေနဲ့ ဘူးအပေါ်က နှုတ်ခမ်းပုံစံလေးတွေက သင့်ကို ၀ယ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တာ အသေအချာပါပဲ။ဈေးကလည်း သက်သာပါတယ် $4.80ပါ။
TonyMoly Petit Bunny Gloss Bars, $8
Vitamin Eအပြည့်ပါဝင်တဲ့ ယုန်ပုံစံ နှုတ်ခမ်းနီချောင်းလေးတွေက အမြင်အတွက်ပဲ လှစေတာမဟုတ်ပါဘူး အလွန်နူးညံ့မှုနဲ့ အသီးအနံ့လေးတွေကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက $8ပါ။ ချစ်စရာကောင်းလို့ တစ်ချောင်းလောက်တော့ ၀ယ်ထားသင့်ပါတယ်။
Lip Smacker Coke Cup Lip BaLM 4$
သင်က Coke Fanတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီနှုတ်ခမ်းနီကို မရှိမဖြစ်ကို ၀ယ်သင့်ပါတယ်။စိတ်ကျေနပ်မုအပြည့်အ၀ပေးနိုင်တဲ့အပြင် Sprite,Fanta နဲ့ Cherry Coke အရသာတွေပါ ရွေးချယ်စရာရှိလို့ အမိုက်စားပါပဲ။ဈေးနှုန်းကလည်း $4ပဲနော်။
Captain Blankenship Rosy Red Lip Balm, $16.
ပါးနီအဖြစ်ရော နှုတ်ခမ်းနီအတွက်ပါ အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ Captain Blankenship Rosy Red Lip Balmမှာ သဘာဝ အပင်တွေကရတဲ့ဆီနဲပထောပတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ထုတ်ပိုးမုပုံစံကလည်း အိတ်ဆောင်အနေ သံဗူးအ၀ိုင်းလေးထဲမှာ Lip Balmထည့်ထားတာပါ။ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလို့ ၀ယ်သင့်ပါတယ် ဈေးနှုန်းက $16ပါ။